Umhla My Pet » Indlela Ukungafuni Nentlungu Yokwahlukana
ukubuyekezwa: UCanzibe. 27 2020 | 2 min ukufunda
Njengoko isitsho njalo, ligqobha kunzima ukwenza. Ukuba isigqibo ukuphelisa ulwalamano uphumeza nayo nayiphi na iimvakalelo okanye iimvakalelo, kubalulekile ukuhlola indlela yakho ekwahlulahlula off ukuphepha ukukhathaza omnye umntu. Eyiyo yoqhawulo-up yokuziphatha ixhomekeke kakhulu ixesha elingakanani wena neqabane lakho ziye kubudlelwane, indlela enzulu na ubudlelwane, kwaye ukuba okanye hayi mvakalelo Mutual.
Xa nesiphelo ubuhlobo zama ukuyenza loo nto neklasi novelwano. Nazi iingcebiso ezimbalwa kufuneka silandele xa ilixesha ukwaphula izinto, kodwa khumbula ulwalamano nganye ngayo yahlukile, ulindele kungalindelekanga impendulo.
Musa ukuzama ukwenza izizathu ngenxa ekuphazanyisweni ukuba ngaba kukho. xelela nje iqabane lakho kutheni budlelwane okungakusebenzeliyo. Emondla Iwakhe Iit akukho na, nto umgca mei angenza bakwenza uzive ngathi uvumela phantsi lula iqabane lakho, kodwa yena okanye yena iincukaca baya kubona kule kwaye nokuba wenze izizathu kutheni asithandwa ebangela ukuba kube kubi ngakumbi ebuhlungu.
Musa Umtya nazo
Ukuba isigqibo ukuba ukwahlukana nomntu, akukho sizathu icothe ulwalamano lwakho. Ngokuphepha nahlukene, neqabane ukuze ikhula ngakumbi nangakumbi apha, into ngokuqinisekileyo awufuni. Xa ufuna ukuphelisa ulwalamano, vumela omnye umntu ukuba msinyane kangangoko ngokufanelekileyo kunokwenzeka ukuba iimvakalelo zabo musa qhubeka uzabalazela ukuba lwendele nokuphuhlisa.
Into yokugqibela ngumntu kulahlwa afuna ukuba uve ngokwenene II Ufuna ukuqhubeka ulwalamano lwethu njengoko friendsî kanye xa nangoku eluthandweni. Kuhle ukuba bonke abachaphazelekayo ukuze anike umntu ixesha nawe iyaqhawuka ukufumana phezu phambi uzama ukwakha ubuhlobo nabo. ngokunjalo, musa ukuzama ukutshintsha ngokuthandana ukuya ìfriends kunye benefitsî ubudlelwane ukuba uyazi omnye umntu nangoku fukama iimvakalelo kuwe. Oku kunoku kunika omnye umntu ithemba lobuxoki ukuba ufuna ukuvuselela romance xa, kwinyani, wena ukuba a. Oku kunokukhokelela ukudideka naxolo neemvakalelo ekuhambeni kwexesha.
Musa ukucinga ukuba ngenxa yokuba nje wena kwindawo kawonke xa bayahlukana nomntu uya kuyeka ngempumelelo ukuba umntu enze umfanekiso. Ngamanye amaxesha iimvakalelo ezinamandla akakwazi ithintelwe kungakhathaliseki ukuba baninzi abanye abantu. Xa hlukana nomntu kwindawo kawonke ukuba ukubeka loo mntu imeko engathi iintloni phezu uxinezeleko yokuba kulahlwa. Oku kubonisa ukungabi nantlonelo ngokukokwenu. Ligqobha into ekufuneka yenziwe ngasese ukwenzela ukuba naziphi na iimvakalelo lungabonakaliswa ngaphandle nantloni.
Sebenzisa UMthetho Omkhulu
Enoba ugqiba ukuba ukwahlukana nomntu, kungcono ukuba usoloko ukugcina ulawulo yegolide engqondweni N Yenza kwabanye njengoko kuya kufuneka ukuba kuni. Ukuba xa kulahlwa, uya kufuna omnye umntu ukubonisa ukunyaniseka nentlonipho kuni. Gcina engqondweni oku xa uceba sicwangciso yakho Wowuqhekeza. Musa ukuphatha iqabane lakho okufanayo ngendlela kunokuba nokulindeleyo indlela zinganyangeka xa imeko ushunyayezwayo.